Miguel Almiron Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
musha South AMERICA FOOTBALL STORies Miguel Almiron Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
LB inopa Nyaya Yese yeBlack Genius inonyatsozivikanwa nezita rezita rokuti "Miggy". Yedu Miguel Almiron Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeakajeka zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Hupenyu uye Rise yeMiguel Almiron- Chikwereti kune nzira,ThePlayersTribune uye SkySports
Kuongorora kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, mhuri yemhuri, nyaya yehupenyu musati mazita, kusimudzirwa mukurumbira nyaya, hukama, hupenyu hwehupenyu uye mararamiro.
Ehe, munhu wese anoziva nezve zvake kuzvininipisa maitiro kune hupenyu, mumwe munhu angagona kutsungirira kukuvadza nhunzi pagomba. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga nezveMiguel Almiron's biography iyo inonakidza kwazvo. Iye zvino pasina kumbopfuurira mberi, ngatitangei.
Miguel Almiron Childhood Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Upenyu Hwekutanga uye Mhuri
Kutanga kuenda, mazita ake akazara ndiMiguel Ángel Almirón Rejala. Almiron akaberekwa pazuva re10th raFebruary 1994 kuna amai vake Sonia Almiron uye baba, Reuben Almiron muguta guru reAsunción, Paraguay. Pazasi pane mufananidzo waSonia naReuben, vabereki vake vakanaka.
Miguel Almiron Vabereki- Sonia naReuben Almiron
Miguel Almiron WAKAITWA kurerwa mumhuri yakapfuma kana yepamusoro yepamusoro-soro mhuri. Mhuri yake yakanga yakafanana nevarombo vazhinji muAsunción vaishanda asi vasina dzidziso yakanyanya yemari uye kazhinji kazhinji vaitambudzika nemari.
Miguel Almirón akazviwana akurira mumhuri yevarombo, imwe yakashandiswa nababa vake Rubheni -18-awa sekuchengetedza seyekuchengetedza uye amai vake Sonia vakashanda sechitoro chekuchengetera zvinhu. Miguel Almiron aive nezve 5 siblings. Vanomwe vese veimba yake vaibata imba diki uye mudiki Miguel iye achinorara mubhedha naamai vake.
Miguel Almiron Childhood Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Dzidzo neKubata Buildup
Kick Nhabvu yakatanga mangwanani-ngwanani kune mukomana akanyarara uye anonyara. Nekuti vabereki vake vaive varombo, mudiki Miguel Almiron haana kupihwa mukana wekuwana mitsva yemitambo yematoyi BUT chete yekare bhora bhora bhora raakatemera kazhinji zuva rezuva.
Miguel Almiron achiri mukomana mudiki. Chikwereti: TPT
Miguel Almiron akaenda Escuela Basica chikoro chepuraimari apo akatamba mutambo wakanaka wenhabvu. “Miguel aive mudzidzi akanyarara aiita basa rake remumba. Aisava mumwe weavo vana vane usimbe vanogara vachiomarara kana kusadzikama, ”Aimbove mudzidzisi wake Maria del Pilar Bernal.
Sezvo Miguel Almiron paakakura kuva 7-gore, akatanga kurota kuzviita hukuru. Chishuwo chake chikuru chaive chekuva nemari yakakwana yekutenga mhuri yake imba hombe. Pakutanga, akaona tarisiro yebasa renhabvu senzira chete yekubatsira kwake mhuri yake kupukunyuka urombo. Izvi anotenda kumuona achiisa simba rake uye kutsunga pamitambo yetsiva iyo yakatanga mumunda wakasendekwa-wakakomberedza masango eSan Pablo barrio, Asuncion.
Iyo yakaoma pfupa-yakaoma gomba uko Miguel Almiron akadzidza kutamba Nhabvu. Kiredhiti kuna ThePlayersTribune
Iyo yakaoma, yakaoma-pfupa-gomba uko Miguel akaremekedza hunyanzvi hwekuita zvekumutyaira zvakamupa iyo samu yekusarudza zvaachaenda. Baba vaAliron Reuben vakatsigira mwanakomana wavo nekuenda naye kubva kunharaunda yavo yekunyaradza kuitira kuti iye akwikwidze neshamwari.
"Miguel aitya kwazvo. Aishaiwa kuvimba uye aigona kutya. saka ndakaenda naye (kukirabhu) kuti ave nedzimwe shamwari,"Baba vake Ruben Almiron akaudza." ESPN.
Miguel Almiron Childhood Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Basa Rokutanga Upenyu
Miguel Almiron akakurumidza kutanga kuita zvakanaka uye akaita shamwari zhinji mukati memwedzi mishoma yekusiya yakaoma, pfupa-yakaoma gomba riri padyo nepamba pake. Izvo hazvina kutora nguva iye asati agamuchirwa munaNovember 3 Club, mudzidzi uyo timu yake yepamusoro yakatamba muChikamu chikamu cheParaguayan nhabvu. Iyo academy yaive ibwe rakanda kure kubva pachikoro chake chepuraimari.
Kunzwisisa chishuwo chavo chemukomana kuti vatambe nhabvu uye nezvekuti vawane chouviri kubva pazviri, vese vemhuri yake, kusanganisira hama vakaita zvese zvavaigona kuti vatsigire zvido zvake. Pazasi ndangariro dzinosara dzemazuva ake ekutanga ebasa.
Miguel Almiron Upenyu hwepakutanga neBhora- Iyo yakasara ndangariro dzeChuru kuna TheSun
Vabereki vaMiguel Almiron vakave nechokwadi chekuti mwanakomana wavo haana kumbopotsa kudzidziswa kwake bhora. Babamunini vake vanonzi "Diego"Uye muzukuru anofamba nezita"Chelo"Vese vakachinjana kuenda naye kunodzidzira.
Miguel Almiron Childhood Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Mugwagwa Mukurumbira Nhau
Mikana yakauya sezvo Miguel Almiron akaramba achifambira mberi nehunyanzvi hwake. Pazera re14, Miguel aive akagadzirira kubva munaNovember 3 Kirabhu mukana mutsva. Iyo ganda rakasvava ndakokwa kuyedzwa neClub Nacional, rekodhi-kuputsa kirabhu uye mapfumbamwe-nguva makwikwi eParaguay's Primera Division.
Nehurombo, akakundikana miyedzo nekirabhu. Kuti arege kuita kuti muzukuru wake ape hope pakurota kwake, babamunini vaMiguel Almeron Diego vakasarudza kutora nyaya mumaoko. Diego akamubatsira kuchengetedza kumwe kuedzwa naCerro Porteno. Mumashoko ake…
"Isu takaenda naye naamai vake kumiedzo kwatakasangana nevakomana ve300 vakatomirira kuwana iwo mukana mumwe chete. Handifi ndakazvikanganwa nekuti Miguel aive nhamba 301 muchikwata"Miguel Almeron babamunini vaDiego vakadaro.
Miguel anopfuura nemiedzo achitenda nekugona kwake. Nekudaro, zvakadaro hazvina kushanda zvakananga ipapo kuAlmiron, uyo akatadza kuridza timu ye Under 15 uye Under 16 level. Akapomedzerwa kuve akanyanya kureruka, mumwe munhu aisakwanisa kukura.
Almiron akambopomerwa mhosva yekunyanyisa kurerutsa. TpT
Zvinosuruvarisa MunaNovember 2010, apo vatambi vedzidzo vaidonha kubva kuma squads, murombo Miguel aive pakati peavo mazita (pane iyo rondedzero) kudonhedzwa. Kutyisidzira kudonhedza Miguel Almiron kwakaenderera kusvika pagore 2011 pasina tariro yekumuona achikura. Pane imwe nguva aive padanho rekusunungurwa nekirabhu, aimbove murairidzi wake Hernan Acuna akapinda, achimununura.
Hernan Acuna akambosimuka paAlmiron. Kiredhiti-TigoSports
"Ndakaenda kumurongi uye nabepanhau ndikavaudza: 'Ini handidi kuti kirabhu idzingise mukomana iyeye nekuti akangwara."Akadaro Acuna, kirabhu iri pasi pemubhokisi we17.
Hernan Acuna anga ari ngirozi yekuchengetedza iyo yakaita iyo Almiron ndiyo inonyanya kutarisa chikamu chake, ichimupa basa rekuita. Aive nebasa rekupedza kudzidza Miguel Almiron kupinda muchikwata chekutanga chechabhu.
Miguel Almiron Childhood Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Kumuka Mukurumbira Nhau
Miguel Almiron mukudzoka akabhadhara nekubatsira timu yake kukunda Paraguayan Clausura mukombe mu2013 neClausura mukombe mu2015. MunaAugust 2015, Miguel Almirón akanzwa kudikanwa kwekuve pachena kune mutsva tsika uye nzira dzekudzidzisa, nekudaro achifunga kusiya nyika yake.
Almiron yakasainwa yeClub Atlético Lanús muArgentina Primera División. Mumwaka chete, Almiron yakabatsira kirabhu kuhwina mikombe ye3 iyo- Copa Bicentenario, Supercopa Argentina neArgentina Primera División tiketi yese mu2016.
Miguel Almiron akabudirira kwazvo kuClub Atlético Lanús. Kiredhiti kuna IG naPicnano
Mushure mekuwana zvese izvi, Almiron akabva munyika kuenda kuUS kwaakanoayina kuAtlanta United FC. Waizviziva here? Kubudirira kwakapfuurira kuUnited States. Miguel Almiron akatumidzwa muMLS Best XI yemwaka wake wese muMajor League Soccer, pamwe nerekodhi yeMLS Newcomer yeGore ye2017. Nguva yake yakakura kwazvo muUS ndipo paakabatsira timu yake kuhwina MLS Cup mu2018.
Miguel Almiron Nhoroondo Yekubudirira- Iyo Rise to Fame Nhau. Chikwereti kuna IG
Pa 31 Ndira 2019, Almirón akabatana neNewcastle United pamubhadharo wekirabhu-rekodhi uyo unorova uyo Michael Owen. Senge panguva yekunyora, agadzikana muhupenyu muNorth East yeEngland uye vanhu veNewcastle vanofara kuti pakupedzisira vaine mutambi wavanogona kunyatsofara pamusoro pake. Vamwe vose, sezvavanotaura, ikozvino nhoroondo.
Miguel Almiron Childhood Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Ukama Hupenyu
Kumashure kwemurume wese mukuru mukadzi, ndizvo zvinoita chirevo. Uye kumashure kweanenge wese bhora, pane mukadzi akanaka kana musikana waanoona sezvinoonekwa mune munhu akanaka we Alexia Notto anoitika kuva mukadzi ari shure kweMiguel Almiron hupenyu hwerudo.
Sangana nekunaka Alexia Notto- Miguel Almiron's Girlfriend. Chikwereti kuna IG
Musikana akanaka-ane bvudzi rakanaka Miguel Almiron akadzidziswa zvakanaka muZumba. Ichi chirongwa chekusimbisa muviri chinonyanya kufarirwa muSouth America mudunhu. Alexia Notto akaita izvi kuti awane chouviri asati aperekedza murume wake kuUS uyezve kuEurope.
Miguel Almiron akasunga banga nemusikana wake pedyo naNovember 2016, iro gore rekubudirira kwake sebasa rakatanga. Zvino raivewo gore raive asiri muviri. Tichitarisa kubva pamufananidzo wavo wemuchato, zvaiita sekunge pachiitiko chega chega pakwakokwa nhengo dzemhuri chete.
Miguel Almiron naAlexia Notto Mufananidzo weMuchato
Sezvo vakasunga banga, vese vari vaviri vakanakidzwa neyakavanzika uye yevatambi mutambo-wakasununguka. Senge panguva yekunyora, vaviri ava pari zvino vagadzikana kuupenyu kuNorth East England naAlexia Notto kupa zvese manzwiro ekutsigira murume wake kunyange iwe zvinoreva kumuisa Zumba rake pabasa.
Miguel Almiron naAlexia Notto vanogadzikana muhupenyu kuNewcastle. Chikwereti kuna IG
Miguel Almiron Childhood Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Upenyu hwehupenyu
Kuziva hupenyu hwaMiguel Almiron uri wega kubva pabhora renhabvu zvechokwadi kuchakubatsira kuti uwane mufananidzo wakazara wake.
Kusvika pakuziva Miguel Almiron Hupenyu hweMunhu. Chikwereti kuMSN
Kutanga kubva, Miguel Almiron ari pakati wepamusoro 5 footballeers ane anozvininipisa zvakanyanya pamoyo. Iye mumwe munhu asingamboiti zvekurwa uye iye anoteerera kwazvo.
Sezvakangoita N'golo Kante, akazvarwa anonyara uye akanyarara, asi kune rimwe divi, anogona kuve neane moyo uye simba kunyanya kana achiita basa rake padanho. Miguel Almiron anofunga zvakadzama uye ane ruzivo rwakanyanya anoshandisa pfungwa dzake pamukana wese.
Miguel Almiron Childhood Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Upenyu hweMhuri
Miguel Almiron akazozadzisa vimbiso yekutengera vabereki vake uye nhengo dzemhuri imba panguva yaakatamira kuLanus yeArgentina mu2015, zvakare gore raakaroora. Aifanira kutenga imba munzvimbo imwe chete yaakakurira, imwe hombe kuti ive nemakamuri ababa vake, mum, muzukuru, ambuya, babamunini, madzikoma nevanun'una kuti vagare.
Nhasi, kubhadhara kwake kukuru kunotarisira nhengo dzese dzemhuri. Miguel anoshandisa yakawanda kubhadhara uye kuvapa dzimba kune imwe nyika imwe nhabvu yake inomutora kuenda kwaari.
Miguel Almiron nhengo dzemhuri dzinomira mufananidzo. Chikwereti kuna IG
Asides mai vake uye baba vake, babamunini vaAlmiron, Deigo ndiye anotevera munhu ane mukurumbira muhupenyu hwake. Diego aive nebasa rekubatsira muzukuru wake kubata kushungurudzika mushure mekunge atadza kuyedzwa neClub Nacional.
Sangana naMiguel Almirons babamunini- Diego
Miguel Almiron Childhood Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - LifeStyle
Miguel Almiron ndiye mutambi akapfuma kwazvo mubhola ane mubhadharo-mutsipa wake unotaura zvakawanda. Pane imwe nguva, akabata rekodhi ye 12th yepamusoro-yakabhadhara mutambi mune Major Soccer League (MLS) nhoroondo. Kune mumwe munhu akamboita $ 209,000 pachinangwa chakagadzirwa uye akabata mutengo wemusika wemadhora 9 mamirioni, zvinotarisirwa kuti anofanira kunge achirarama hunonakidza mararamiro sezvinoonekwa pazasi.
Kunzwisisa mararamiro aMiguel Almiron. Kiredhiti teregirafu
Izvi, zvakadaro, hazvisizvo. Miguel Almiron anorarama anozvininipisa mararamiro uye akangwara pakubata kwake mari.
Miguel Almiron Childhood Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Untold Facts
Wake Anodiwa mutambi wenguva dzose anogara aine vavariro:
Miguel Almiron akambopindura nekukurumidza paakabvunzwa kuti ndeupi mutambi waanoyemura zvakanyanya munhoroondo yebhola. Mukuziva kwake nhabvu, panongova nechidhori chimwe chete. Haasi mumwe munhu kunze kweanozivikanwa Paragiuan anovavarira Chilavert uyo aive mutserendende wechikwata chenyika panguva ye1990's.
Sangana naJosé Luis Chilavert- Miguel Almiron's Idol. Kiredhiti FoxSports.
Wakanga uchiziva! Chilavert anoramba ari iye chete mushambadzi munhoroondo uyo aigara achitora mahara kurohwa uye zvirango, zvichimuita wechipiri-wepamusoro mukoroti wekuhwina nguva dzese.
Maitiro ake CV anotaridzika sezvakaita panguva yekunyora: Ukatarisa muunganidzwa wake wevanhu uye wekirabhu kukudzwa, unogona kuziva nyore kuti nei Newcastle United yasarudza kubhadhara mubhadharo kupfuura iyo yaishandiswa kutenga Michael Owen kutenga Miguel Almiron.
Miguel Almiron somunhu uye mukirabhu kukudzwa
Sezvacherechedzwa pamusoro, Miguel Almiron aigara aine chimwe chinhu chekupa vashandirwi vake kungangoita mwaka wega wega, kutanga pa2016.
CHOKWADI CHINOGONA: Vongai nekuverenga kwedu Miguel Almiron Childhood Story plus Untold Biography Facts. At LifeBogger, isu tinoedza kururamisira uye kusaruramisira. Kana ukawana chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka, tapota shandisa nesu nekupindura pasi apa. Tichagara tichikoshesa uye tichiremekedza pfungwa dzako.
Salomon Rondon Utano Nhau Plus Untold Biography Facts
Hirving Lozano Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Antonio Valencia Mwana weChiitiko Plus Untold Biography Facts
Arturo Vidal Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
Thiago Silva Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts
Paul Dybala Uchiri Hwokuzvarwa Nhau Plus Untold Biography Facts